I-WireGuard ekugcineni yamukelwe yiLinus Torvalds futhi izofakwa kuLinux 5.6 | Kusuka kuLinux
I-WireGuard ekugcineni yamukelwe yiLinus Torvalds futhi izohlanganiswa neLinux 5.6
NgoMsombuluko, Kwembulwa umgcini wesitaki se-Linux kernel uDavid Miller ukufakwa iphrojekthi I-WireGuard, uhlelo lokusebenza lwesoftware kanye nenqubo yokuxhumana yomthombo omusha yamahhala futhi evulekile, esihlahleni se- "net-next" se-Linux kernel.
Ngokwengxoxo ngale phrojekthi, yize kusekhona ukuhlolwa okusamele kwenziwe, kufanele ikhishwe kunguqulo enkulu elandelayo ye-Linux kernel, inguqulo 5.6, kwikota yokuqala noma yesibili ka-2020 njengoba iWireGuard ithole imvume kuLinus Torvalds yokuhlanganisa neLinux.
I-WireGuard iyi-VPN elula kakhulu, kodwa esheshayo futhi kwesimanje esisebenzisa ukubethela okuthuthukile. Lokhu kubekwe ukuba kusheshe, kube lula, kube lula futhi kube wusizo kune-IPsec ngokungeziwe ku ithi ingcono kakhulu kune-OpenVPN.
I-WireGuard yakhelwe njenge-VPN eguquguqukayo ukusebenza kuma-interface ashumekiwe, kepha nakuma-supercomputer, alungele izimo eziningi ezahlukahlukene. Ikhishwe ekuqaleni nge-Linux kernel, manje seyi-cross-platform futhi isetshenziswa kabanzi.
I-WireGuard sebenzisa i-Curve25519 ukushintshanisa ukhiye, I-ChaCha20 yokubethela, i-Poly1305 yokufakazela ubuqiniso bedatha, i-SipHash okhiye betafula le-hash, kanye ne-BLAKE2s ye-hash. Ixhasa u-Layer 3 we-IPv4 ne-IPv6 futhi ingafaka i-v4-in-v6 futhi ngokufanayo.
I-WireGuard yamukelwe abanye abahlinzeki bezinsizakalo zeVPN abanjengoMullvad VPN, AzireVPN, IVPN, kanye ne-cryptostorm, isikhathi eside ngaphambi kokufakwa kwayo kwiLinux, ngenxa yedizayini yayo "enhle kakhulu". Uthole iminikelo kwa-Private Internet Access, IVPN, nakuNLnet Foundation.
Njengamanje ikhula ngokugcweleKepha kungathathwa njengesixazululo esiphephe kunazo zonke, esilula kakhulu ukusisebenzisa, nesilula se-VPN embonini. Yisixazululo se-Layer 3 VPN esiphephile.
Ngokungafani nezimbangi zayo zangaphambili, okuhloswe ukuthi zithathe isikhundla sazo, ikhodi yayo ihlanzekile kakhulu futhi ilula. Ngokusho kokucaciswa kwephrojekthi, i-WireGuard isebenza ngokuhlanganisa amaphakethe we-IP ngokuphepha nge-UDP. Ukuqinisekiswa kwayo nokwakhiwa kwesixhumi esibonakalayo kuhlobene kakhulu ne-Secure Shell (SSH) kunamanye ama-VPN.
Umbhali oholayo we-WireGuard uJason Donenfeld uthi:
Konke okudingeka ukwenze ukulungisa isikhombimsebenzisi se-WireGuard ngokhiye wakho wangasese nokhiye bomphakathi wontanga yakho, futhi usukulungele ukukhuluma ngokuphepha. Kwakubhalwe ku-C (amamojula we-Linux kernel) naku-Go (isikhombimsebenzisi somsebenzisi).
Ukwenza lula ukuthuthukiswa, ikhosombe le-monolithic "IWireGuard.git", lokho kwakenzelwe impilo ehlukile, izothathelwa indawo amakhosombe amathathu ahlukene okulungele kangcono ukuhlela umsebenzi wekhodi ku-kernel enkulu:
i-wireguard-linux.git - Isihlahla se-kernel esiphelele esinezinguquko kusuka kuphrojekthi ye-Wireguard, iziqeshana zazo ezizobuyekezwa ukuze zifakwe ku-kernel futhi zidluliselwe njalo emagatsheni enetha / enetha elilandelayo.
wireguard-amathuluzi.git- Indawo yokugcina izinsiza nemibhalo esebenza esikhaleni somsebenzisi, njenge-wg ne-wg-quick. Indawo yokugcina ingasetshenziswa ukudala amaphakheji wokusabalalisa.
i-wireguard-linux-compat.git indawo yokugcina enenketho yemodyuli, enikezwe ngokuhlukile kusuka ku-kernel futhi ifaka ungqimba lwe-compat.h ukuqinisekisa ukuhambisana nezinhlamvu ezindala. Ukuthuthuka okuyinhloko kuzokwenzeka endaweni yokugcina izinto i-wireguard-linux.git, kepha kuze kube manje abasebenzisi banethuba nesidingo senguqulo ehlukile yamachashazi nawo azosekelwa efomini elisebenzayo.
Kulindeleke ukuthi ngokushesha kube yindinganiso entsha yama-VPNs I-Linux lapho ifika. Ngosayizi wayo omncane wekhodi, isivinini se-crypto esheshayo, nokwakhiwa okuyisisekelo, kufanele kusheshe kunanoma iyiphi enye i-VPN laphaya.
Ngendlela yakho yokuvuma i-VPN entsha, ILinus Torvalds icabanga ukuthi uyiqhathanise namanye ama-VPN futhi ibheka ukuthi ingcono kakhulu.
"Ngingaphinda ngiphinde ngiveze uthando lwami ngaye futhi nginethemba lokuthi uzohlangana kungekudala?" Le khodi ingahle ingabi nephutha, kepha ngiyicuphile futhi ngiqhathanisa nokwesabekayo kwe-OpenVPN ne-IPSec, kungumsebenzi wobuciko, ”kusho yena nge-WireGuard.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-WireGuard ekugcineni yamukelwe yiLinus Torvalds futhi izohlanganiswa neLinux 5.6
I-Google Chrome 79 ifika nomsebenzi wamathebhu wokuqandisa, uhlu lwabamnyama ngesikhathi sangempela nokuningi